Xaflad loogu dabaaldageyey aasaaskii Puntland oo Adis Ababa lagu qabtey (Sawiro) – SBC
Xaflad loogu dabaaldageyey aasaaskii Puntland oo Adis Ababa lagu qabtey (Sawiro)
Xaflad si qurux badan loo soo agaasimayoo lagu xusayay sanad guuradii 13aad ee ka soo wareegatay markii dhidibada loo taagay dawladda puntland ayaa habeenimadii sabtida ahay kuna beegnayd 30-08-2011 lagu qabtay caasimada dalka Ethiopia ee Addis ababa.
Xafladaa oo laga soo hormariyay waqtigeedii bisha Ramadaan oo soo gashay awgeedayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mida madaxda dawladda puntland oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka nugaal cabdi xirsi cali qarjab, marti sharaf , dhammaan shacabwaynaha reer Puntland ayaa waxa ay ku billaabatay jawi dagan iyadoo la isugu hambalyaynayay xuska maalinta qiimaha wayn ugu fadhida shacabka reer Puntland.
Ugu horrayn waxaa hadal kooban ka jeediyay gudoomiyaha gudiigii qabanqaabada xaflada isagoo ka sheekeeyay sidii ay ugu dhabar adaygeen in ay qabsoonto xafladan waxaa kalmado is daba jooga ka jeediyay halkaas xubo kala duwan oo ku hadlay magacyada haweenka, dhalinyarada , ardayda reer Puntland ee wax ka barata caasimada addis ababa iyagoo dhamaantood hambalyo u dirayay shacabwaynaha reer Puntland meel kastoo ay joogaan.
Ugu danbayntii waxaa makarafoonka lagu soo dhaweeyay gudoomiyha gobolka nugaal oo taariikh kooban ka faalooday dhismihii dawlada Puntland isagoo ugu danbayn hambalyo u diray dadwaynaha reer Puntland meel kasta oo ay joogaan.
Xafladan oo ahayd xaflad si wayn ay uga soo qayb galeen dhamaan qaybaha kala duwan ee shacabka reer puntland ayaa waxa ay ku soo gabagabawday jawi aad u qurux badan iyo waliba farxad iyo rayn rayn iyagoo dadkuna ay way wada lahaayeen hambalyo sanad guuro wacan sanadkan sanadkiisa allaha nagu gaarsiiyo nabad iyo barwaaaqo.
ramlo cabdulaahi says:
kkkkkkkkkkkkkkkk caadi maahan reer addis ababa waa marayaaan xafladu caadi ma ahayn waa layaabay hanbalyaan leenahay anuguna maadamaan nahay jaaliyada reer puntland ee addis ababa ethopia
kkkkkkkkkk run baad sheegtay allaylehe sanadkaan reer addis boorkay iska jafeeeeeeeeen ma joogtay ramlooy habeenkii dhaweyd